News Collection: भुवनले केटी जिस्काएपछि लफडा !
भुवनले केटी जिस्काएपछि लफडा !
स्त्री र सत्ता यस्ता चीज हुन्, जुन एकपटक चाखेपछि सँधै चाख्न मनलाग्छ । भुवन केसी यस्तै एक पात्र हुन् । केही महिना पहिले गर्लफ्रेन्डका श्रीमानबाट बीचसडकमा दिउँसै पिटाइ खाएका अभिनेता केसी केटीका कारण फेरि अर्को स्कयान्डलमा फसेका छन् । भुवनले केटीलाई जिस्काएकै कारण उनका साथीले नराम्रैसँग धुलाइ खानुपर्‍यो भने भुवन त्यहाँबाट टाप ठोके । घटना मंगलबार राती १० बजे दरबारमार्गस्थित प्रहरी चौकी पछाडिको सिमल लाउन्ज एन्ड क्याफेको हो । नाम नखुलेका आफ्ना एक साथीलाई लिएर भुवन उक्त क्याफेमा मदिरा पिउन छिरेका थिए ।
भुवन छेवैको अर्को टेबलमा चारजना केटीहरु पनि मदिरा पिउँदै थिए । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार केही मिनेटमै भुवन र ती लेडिज बसेको टेबल चिप्लिएर आपसमा जुध्यो । ती केटीहरुले आफूहरु भुवनको फ्यान भएको बताउँदै भुवनको प्रशंसा गरिरहेका थिए । भुवनले यही मौकाको फाइदा उठाउँदै तीमध्ये एक केटीको संवेदनशिल अंगमा चिमोटिदिएछन् । चिमोटेका मात्र थिएनन् केटीको स्तन पनि मुसार्न थालेछन् । भुवनले यस्तो गर्न थालेपछि ती केटी चिच्याइन् ।
भुवनले आफूलाई दुब्र्यवहार गरेको कुरा साथीलाई बताएपछि केटीहरु चिच्याउन र उफ्रन थाले र भुवनलाई छाडा शब्दमा गाली गर्न थाले । 'साला ! आफूलाई नेपाली फिल्मको सुपरस्टार भन्छ…' केटीहरु आक्रोशमा भुवन र नेपाली फिल्मलाई गाली गर्दै थिए । भुवनजस्ताकै कारण नेपाली फिल्म बदनाम भएको बताउन पछि परेनन् । अब लफडा चर्कने भयो भन्ने थाहा पाएर भुवन सुटुक्कै सो लाउन्जबाट कुलेलाम ठोके । भुवन भागेपनि उनको गाडी भने अहिलेसम्म उक्त होटलमै छ । संचालकका अनुसार उनी अहिलेसम्म गाडी लिन पुगेका छैनन् । विचरा ! उनका अर्का साथीले भने नराम्रोसँग ती केटी र छेउका केटाहरुको रामधुलाइ खानुपर्‍यो । भुवनको केटी जिस्काइकै कारण उनलाई बचाउन खोज्ने निर्दोष साथी घाइते हुनुपर्‍यो ।
आफ्नै नाक मुन्तिर घटना भएपनि प्रहरी भने आएन । भुवन यसअघि पनि सो रेष्टुराँमा जाने गर्थे । केटीसँगको हर्कतको कारण यसअघि बदनाम कमाइसकेका भुवनले सेतो टिसर्ट, जिन्स र क्याप लगाएका थिए । यस्तै कारण आफ्नो दाम्पत्य जीवनमा संकट खेपिरहेका भुवन केटी, अफेयर र मदिराका कारण यस्ता बदनाम खेप्दै आएका छन् । उनीजस्ता केही व्यक्तिका कारण सिँगो चलचित्र उद्योगलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो बनेको छैन ।